२५ वर्षअघि मानव शरीरमा सुँगुरको मुटु राख्ने भारतीय डाक्टरलाई जेल हालिएको थियो - बडिमालिका खबर
२५ वर्षअघि मानव शरीरमा सुँगुरको मुटु राख्ने भारतीय डाक्टरलाई जेल हालिएको थियो
नयाँ दिल्ली —‘मैले २५ वर्षअघि मानिसको शरीरमा सुँगुरको मुटु राखेको थिएँ, त्यस क्रममा मैले अनुसन्धानको आधारमा सुँगुरका हरेक अंग मानिसको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विश्वलाई बताएको थिएँ तर मलाई कसैले साथ दिएनन्। सरकारले मलाई जेल हाल्यो। अब यति पछि अमेरिकी डाक्टरहरुले सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरेको चर्चालाई विश्वले सफल प्रयोगका रुपमा हेरिरहेको छ’, प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सक ७१ वर्षीय डा धनीराम बरुआ रिसले टेबुलमा मुक्का ठोक्न थाल्छन्।
सन् २०१६ मा ब्रेन स्ट्रोक भएपछि डा. धनिराम बरुवाले स्पष्ट बोल्न सकेका छैनन्। वर्षौंदेखि उनीसँग काम गरिरहेकी डालिमी बरुआहले उनको अस्पष्ट बोली बुझ्छिन् र अनुसन्धानको क्रममा आफूले भोग्नुपरेको अत्याचारप्रति आफ्नो रिस उद्धृत गर्छिन्।
वास्तवमा, हालै अमेरिकी डाक्टरको टोलीले आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरेको छ। युनिभर्सिटी अफ मेरिल्याण्ड मेडिकल सेन्टरका डाक्टरहरूले यस प्रकारको शल्यक्रिया विश्वमा पहिलो पटक गरिएको र सुँगुरको मुटु पाएका डेभिड बेनेट नामका ५७ वर्षीय पुरुष अहिले ठीक भएको दाबी गरेका छन्।
पहिलो पटक सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरेको दावीबारे अमेरिकी डाक्टरहरूले सोध्ने बित्तिकै डा धनीरामले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। तर उनी २५ वर्षपछि चिकित्सा विज्ञानका मानिसले मानव शरीरमा सुंगुरको अंग प्रत्यारोपण गर्न सकिने कुरा स्वीकार गरेकोमा भने खुसी छन्।
सन् १९९७ मा अपरेशन भयो, त्यसपछि जेल हालियो
आसामको सोनापुरमा रहेको डा. धनिराम बरुवा हार्ट सिटी र सिटी अफ ह्युमन जेनोम नामक मेडिकल इन्स्टिच्युट सञ्चालक डा बरुआका अनुसार अमेरिकी डाक्टरहरूले जेनेटिकली मोडिफाइड सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गर्नु कुनै नयाँ कुरा होइन। उनले वर्षौं अघि आफ्नो अनुसन्धानबाट सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपणका लागि प्रयोग गरेको त्यही प्रविधिका आधारमा अमेरिकी चिकित्सकले यो उपलब्धि हासिल गरेको उनको दाबी छ।
मानव शरीरमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गर्ने बारे डा. बरुआले भने, ‘मैले पहिलोपटक सन् १९९७ जनवरी १ मा ३२ वर्षीय मानिसको शरीरमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरेको थिएँ। यो शल्यक्रियाअघि १०० भन्दा बढी अनुसन्धान गरि मानव शरीरले सुँगुरका धेरै भागहरू स्वीकार भन्ने थाहा भएको थियो।’
मुटु प्रत्यारोपणपछि बिरामी7दिनसम्म जीवित थिए। तर बिरामीमा धेरै संक्रमण भएकाले उनको ज्यान बचाउन सकिएन। वास्तवमा, बिरामीको मुटुको तल्लो कक्षमा प्वाल थियो, जसलाई भेन्टिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भनिन्छ। जसका कारण बिरामीमा धेरै किसिमको संक्रमण भएको थियो।
हङकङका शल्यचिकित्सक डा जोनाथन हो के–शिङसँग मिलेर सोनापुरस्थित उनको हृदय संस्थानमा डा. धनिराम बरुआले यो शल्यक्रिया गरेका थिए। करिब १५ घन्टाको यो शल्यक्रियामा डाक्टर बरुआले सुँगुरको मुटु र फोक्सोलाई बिरामीमा राखेका थिए। तर बिरामीको मृत्युपछि यो प्रत्यारोपणलाई लिएर ठूलो विवाद खडा भएको थियो।
घटनाको खबर स्थानीय सञ्चारमाध्यममा फैलिएपछि दुवै चिकित्सकलाई पक्राउ गरिएको हो।
स्कटल्याण्डको रोयल कलेज अफ ग्लास्गोबाट कार्डियो सर्जरी अध्ययन गरेका डा. धनिराम उक्त घटना सम्झँदै भन्छन्, ‘आज संसारभर सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपणको चर्चा छ तर मलाई त्यतिबेला जेलमा राखिएको थियो, संस्थानमा तोडफोड भयो। ४० दिन जेल बस्नुपर्‍यो। सरकारी वा चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्ने कसैले पनि मलाई सहयोग गरेनन्। आज पनि मविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ।’
एक प्रश्नको जवाफ दिँदै डा धनीराम भन्छन्, ‘ग्लासगोमा कार्डियो शल्यक्रिया गरेपछि बेलायत, अबुधाबीलगायत धेरै देशमा काम गरेँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको आदेशमा म स्वदेश फर्किएँ। तर त्यस क्रममा एजीपी सरकारले मलाई नराम्रो गर्‍यो। जेलबाट बाहिर आएपछि मैले आफ्नो अनुसन्धान जारी राखें। अहिलेसम्म मैले मुटु, एचआईभी, मधुमेह जस्ता रोगहरूको उपचारमा प्रयोग हुने 23 वटा औषधी आविष्कार गरिसकेको छु।’
डा. धनीरामले आफूले इन्जेक्सन लगाएर मुटुका बिरामीलाई कुनै पनि प्रकारको शल्यक्रिया गर्न नपर्ने औषधीको विकास गरेको बतए।
उनी भन्छन्, ‘मैले तयार पारेको मुटुको औषधिले मानिसको शरीरमा सुँगुरको मुटु हाल्नु पर्दैन। मुटु रोगीलाई मुटु प्रत्यारोपणको आवश्यकता नपर्ने भन्दै यो औषधि इन्जेक्सनको रुपमा तयार गरिएको हो।’
डा. धनिरामसँग लामो समयदेखि सहकार्य गरिरहेकी डा गीता भन्छिन्, ‘यी औषधीहरू लामो समयको अनुसन्धानपछि तयार पारिएका हुन्। यसका लागि इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) लगायतका अन्य एजेन्सीहरूसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ, यो लामो प्रक्रियाको एक हिस्सा हो जस पछि अनुमति दिइन्छ। हामीले कोरोना भ्याक्सिन पनि तयार पारेका थियौं र आइसीएमआरलाई लेखेका थियौं तर हामीले अनुमति पाएनौं र पर्खन भनियो।’
उनी भन्छिन्, ‘डा. धनिरामले एचआईभीको औषधि पनि डिजाइन गरेका छन् जसमा बिरामीले १० दिनको कोर्स गर्नुपर्छ। बिरामीलाई दिनहुँ इन्जेक्सन दिइन्छ। जसमा एचआइभीको औषधि नलिइ सामान्य जीवन बिताउन सकिन्छ। २५ प्रतिशत बिरामीको उपचारपछि एचआइभी परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ।’
तर, डा बरुवाले गरेको दाबीमाथि पहिले जस्तै प्रश्न उठेको छ। आसामकी एचआईभी एड्स कार्यकर्ता जाह्नबी गोस्वामीले डा धनिराम बरुआले एचआईभीको उपचार सुई लगाएपछि राज्यमा चार जनाको मृत्यु भएको आरोप लगाएकी छन्।
जाह्नबी गोस्वामी भन्छिन्, ‘म डा. धनिराम बरुआको अनुसन्धानमा प्रश्न गर्न चाहन्नँ, तर हामीले उहाँलाई धेरै पटक भनेका थियौं कि तपाइँ आफ्नो एचआईभीको औषधि विश्व स्वास्थ्य संगठनमा पठाउनुहोस्। आइसीएमआरबाट अनुमति लिनुहोस् तर उनीहरूले कसैको कुरा सुनेनन्।
हामीले एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको तर्फबाट डा. धनिरामले बनाएको एचआईभी औषधिको अनुसन्धान गर्न असम सरकारलाई पनि आग्रह गरेका छौं। नौगाउँमा एचआइभीको सुई लगाएर एक बिरामीको मृत्यु भएको छ। आर्थिक रूपमा पिछडिएका र गरिब मानिसहरू विशेषगरी एड्सबाट मृत्यु भएपछि यस विषयमा खासै पछ्याउँदैनन्।
कडा सुरक्षा बीच अनुसन्धान
सोनापुरस्थित डा. धनिराम बरुवा हार्ट सिटी र सिटी अफ ह्युमन जिनोम बाहिर कुनै किसिमको साइन बोर्ड छैन। लामो र अग्लो चार पर्खालले घेरिएको पहाडमा अवस्थित यस हृदय संस्थानमा डा. धनिरामको अनुमतिबिना कोही पनि प्रवेश गर्न सक्दैनन्।
उनको संस्थानमा २०० भन्दा बढी कुकुर छन् जसले कुनै अपरिचित व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिँदैनन्। कुकुरको बारेमा सोध्दा डा. धनिराम मुस्कुराउँदै भन्छन्, ‘मैले चिकित्सा विज्ञानको दुनियाँमा निरन्तर नयाँ–नयाँ अनुसन्धान गरिरहेको छु, तर हामीलाई सरकारबाट कुनै सुरक्षा दिइएको छैन, अहिले मलाई यी कुकुरले मात्र सुरक्षा दिन्छन्।’ बीबीसी हिन्दीबाट